सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको ३५ प्रतिशत हकप्रदमा मूल्य समायोजन पछि कतिमा खुल्यो कारोबार ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको ३५ प्रतिशत हकप्रदमा मूल्य समायोजन पछि कतिमा खुल्यो कारोबार ?
काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको ३५ प्रतिशत हकप्रद सेयरमा मूल्य समायोजन भएको छ । हकप्रद समायोजनपछि सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७५२.५९ रुपैयाँ तोकिएको छ । मंगलबार सिद्धार्थको सेयर कारोबार यही मूल्यलाई आधार मानेर खुलेको हो । औसत आधार मूल्य भने १०२३.८० रुपैयाँ छ । सिद्धार्थले १० बराबर ३.५ को अनुपातमा २२ लाख ४४ हजार ९७३.५० कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ ।
यसका लागि कम्पनीले मंगलबार बुक क्लोज गरेको हो । हाल सिद्धार्थको चुक्ता पुँजी ६४ करोड १४ लाख २१ हजार रुपैयाँ छ । हकप्रदपछि पुँजी ८६ करोड ५९ लाख १८ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम एनएमबि क्यापिटलले गर्दैछ ।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म यस इन्सुरेन्सले १८ करोड ४ लाख २० हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । प्रतिसेयर आम्दानी ३७ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको प्रतिसेयर नेटवर्थ २०७ रुपैयाँ १६ पैसा छ ।
२०७५ जेठ १ गते प्रकाशित
पाँच महिनामै आयो तीन खर्ब ७६ अर्ब ५९ करोडको रेमिट्यान्स
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामै तीन खर्ब ७६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको रेमिट्यान्स
चन्द्र ढकालको आपत्ती : हामी माथि भ्रम सिर्जना गर्ने गलत नियत राखियो
काठमाडौं । सेन्टर फर इन्भेष्टिगेटिभ जर्नलिज्म, (सिआईजे) नेपाल मार्फत तयार गरी सञ्चारमाध्यमहरुमा सार्वजनिक भएका समाचारमा
६ महिनामै डेढ अर्ब नाफा गरेको एनआइसी एशियाले ल्यायो ४ अर्बको ऋण पत्र
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामै १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किर्तिपुर नगरपालिका स्थित चोभारमा आज सुख्खा बन्दरगाहाको शिलान्यास गर्नुभएको
पाँच कम्पनीको सेयर भाउ १०० रुपैयाँ भन्दा तल, ब्याजको त…
६ महिनामै डेढ अर्ब नाफा गरेको एनआइसी एशियाले ल्यायो ४…
बैंकहरुमध्ये इन्भेष्टमेन्ट बैंकले दियो सबैभन्दा बढी लाभांश
तामाकोशीको आइपिओ पर्नेलाई दुई गुना फाइदा
चन्द्र ढकालको आपत्ती : हामी माथि भ्रम सिर्जना गर्ने गलत…
तामाकोशीको सेयर बेच्ने भन्दा किन्ने बढी, एकैदिन २३ रुपैयाँले बढेर…
पाँच कम्पनीको सेयर भाउ १०० रुपैयाँ भन्दा तल, ब्याजको त के कुरा साँवा नै डुब्यो !
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्चेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत पाँच कम्पनीको मूल्य १०० रुपैयाँ भन्दा तल